How'd it happen and more reports?: အွန်လိုင်းပေါ်က အခမဲ့သင်တန်းကျောင်း Khan Academy လေး
အွန်လိုင်းပေါ်က အခမဲ့သင်တန်းကျောင်း Khan Academy လေး
ဒီ Khan Academy မှာ အွန်လိုင်းကနေ မိမိလေ့လာသင်ယူချင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို သင်ယူလေ့လာ လို့ ရပါတယ်၊ မိမိရဲ့ Google သို့ Facebook အကောင့်တွေကနေ အသင်းဝင်ပြီး လေ့လာလို့ရပါတယ်၊
သချာင်္၊ သိပ္ဗံ၊ စီးပွားရေးနှင့် စာရင်းအင်းပညာ၊ ပန်းချီနှင့်လူမှုရေး၊ ကွန်ပျူတာ၊ စာမေးပွဲမေးခွန်း၊ မိတ်ဖက်ကွန်ရက်၊ အင်တာဗျူးလေးတွေ၊ သင်ရိုးညွန်းတန်းလေးတွေများပါဝင်တယ်။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာလေးတွေ အခမဲ့ လေ့လာသင်ယူကျပါလို့လမ်းညွှန်လိုက်ရပါတယ်....
It starts with knowing you can learn anything. Join the movement at http://khanacademy.org/youcanlearnany....
မိမိနှစ်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်ကိုရွှေးချယ် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်...
Wed, 20 Aug 2014 14:14:58